बल्ल सान्त्वना - मनोरञ्जन - नेपाल
डेब्यु फिल्म ब्रेकअपमा आशिरमान देशराज श्रेष्ठसँग रोमान्स गर्न पाउने भएपछि शिल्पा मास्के फुरुङ्ग भइन् । विडम्बना ! छायाङ् कन नहुँदै फिल्मसँग उनको ‘ब्रेकअप’ भयो । यो फिल्म बन्ने/नबन्ने नै टुंगो छैन । त्यसपछि शिल्पाले लिलीबिलीमा प्रदीप खड्काको साथ काम गर्ने खबर बाहिरियो । शिल्पा उक्त फिल्मको तयारीमा जुटिन् । फेरि उही नियति दोहोरियो, लिलीबिलीबाट ‘ आउट’ भइन् । यसरी करिअर सुरुआत नहुँदै मर्माहत भएकी शिल्पालाई निर्देशक अपिल विष्टले सान्त्वना दिएका छन् । अपिलको नयाँ फिल्म कागजपत्रमा औपचारिक रुपमा अनुबन्ध भएकी हुन् । २२ कात्तिकमा आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा फिल्म युनिटले शिल्पालाई मुख्य पात्रका रुपमा परिचित गराएको थियो । धन्न ! धोकामा ‘ ह् याट्रिक’ भएन ।